Global Aawaj | पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट कुन देशमा कतिको मृत्यु ? पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट कुन देशमा कतिको मृत्यु ?
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट कुन देशमा कतिको मृत्यु ?
काठमाडौ । विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरस तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । छोटो समयमै ठुलो रुप लिएको कोरोनाबाट अहिलेसम्म ३ करोड ४१ लाख ४७ हजार संक्रमित भैसकेका छन् । यस्तै, १० लाख १८ हजार २ सय ९ जनाको मृत्यु भैसकेको छ ।
वर्ल्डोमिटरका अनुसार २ करोड ५४ लाख १५ हजार उपचारपछि निको भएका छन् । विश्वको २१६ देशमा फैलिएको कोरोनाबाट थोरै देश मात्र यसबाट बच्न सकेका छन् । यस भाइरस गत डिसेम्बर चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको बताइन्छ । त्यसपछि इटली, स्पेन हुँदै अहिले अमेरिका, ब्राजिल र भारतलाई इपिसेन्टर बनाएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा कोरोनाबाट ब्राजिल र भारतमा मृत्युदर उच्च रहेको छ भने संक्रमितदर पनि उच्च रहेको छ । कोरोनाबाट पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार २ सय जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ लाख १३ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । यो बिहिबार बिहानसम्मको अपडेट हो ।
बितेको २४ घण्टामा कुन देशमा कतिको मृत्यु भयो ?
साउदी अरेबिया -२९
दक्षिण अफ्रिका -६७
डोमोसियन रिपब्लिक -४
कोस्टा रिका -२४
एल साल्भाडोर- ४
दक्षिण कोरिया -६
नर्थ मेसोडोनिया -२
काबो भेर्डे- १
टर्कस् एण्ड क्यासोस -१
तिलोत्तमाले तोक्यो गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य
स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा जिल्लालाई जोड्ने तीनमुखे पुल बन्दै
तिनाउका ५३ टिप्पर एकसाथ चितवन रंगशाला पुग्दा…
रुपन्देहीको एक पेट्रोल पम्पमा इन्धन भर्दै गर्दा ट्यांकरमा आगलागी
भैरहवामा ४५ करोड लगानीमा वाटर पार्क
२०७७ चैत्र २४
रुपन्देहीमा कटुवा पेस्तोलसहित ३ युवा पक्राउ
२०७७ चैत्र १
बुटवलमा समताभोज : दलितले पकाए,ब्राहमणले खाए
आलोचना र सुझाव दिनेलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्न हुँदैन : नेता नेपाल के स्कूलिङ र शिक्षा (एडुकेसन) एउटै हुन् ? तिनाउका ५३ टिप्पर एकसाथ चितवन रंगशाला पुग्दा… कोरोनाबाट दुईको मृत्यु थप ५५९ जनामा कोरोना संक्रमण,१३ जनाको मृत्यु हत्या, दमनविरुद्ध समाजले अभियान चलाउने नेपालमा नयाँ खालको कोभिड-१९ को भाइरस अझै मेलम्चीको पानी वितरण भएन आङ सान सुकीमाथी छ ओटा नयाँ आरोप कालिगण्डकीको ‘कर्णाली’मा भखर्र मोटरबाटो खनिदैँ इरानमा परमाणु केन्द्रमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण शून्य समय : रोजगारीदेखि एमसिसीसम्मका विषय शान्तिका लागि पशुपतिमा वत्सलेश्वरी जात्रा कोरोनाविरुद्ध सचेतना अभियान शुरु डढेलोले वनै खायो… कोरोना सङ्क्रमित एक जनाको मृत्यु एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलाए केन्द्रीय कमिटीको बैठक भारतमा कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ७० हजार नाघ्यो सिद्धार्थनगर सुनचाँदी व्यवसायी संघद्वारा सिरहा घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र प्रतिनिधि सभाकाे बैठक २०७७ चैत्र ३०